किम जोनले किन पठाउँदैछन् गुप्तचर प्रमुख दक्षिण कोरिया ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
किम जोनले किन पठाउँदैछन् गुप्तचर प्रमुख दक्षिण कोरिया ?
फागुन १० गते, २०७४ - १४:१५
उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा हुने हिउँदे ओलिम्पिक्सको समापन समारोहमा एक जना आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीलाई सहभागी हुन पठाउने निर्णय लिएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने नयाँ अवसरका रूपमा दक्षिण कोरियाली सरकारले उक्त कदमको प्रशंसा गरेको छ ।
दक्षिण जाने भनिएका उत्तर कोरियाली गुप्तचर निकायका प्रमुख जेनरल मिम योङ चोललाई दक्षिण कोरियाविरुद्ध कैयौँ आक्रमणहरू गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसै बीच राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इभान्काले प्योङ्च्याङमा सहभागी हुने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाका वरिष्ठ अधिकारीको सहभागितालाई दोस्रो चरणको ओलिम्पिक्स कूटनीति भनिएको छ । ओलिम्पिक्सको उद्घाटन समारोहमा उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनकी बहिनी किम यो जोङ सहभागी भएकी थिइन् । यसपटक सत्तारूढ दलको एकीकृत मोर्चाको नेतृत्व गर्ने उच्चअधिकारी किम योङ चोल दक्षिणको भ्रमणमा आउन लागेका छन् ।
सन् २०१० मा ४६ जना दक्षिण कोरियाली नाविकको ज्यान लिने गरी एउटा नौसैनिक डुंगामा गरिएको आक्रमणको मुख्य योजनाकार भएको आरोप उनीमाथि छ ।
प्योङ्याङबाट आउने समूह तीन दिनसम्म दक्षिण कोरियामा बस्ने र उनीहरुले राष्ट्रपति मून जे इनसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ । यसअघि ‌ओलिम्पिक्सको उद्घाटन समारोहपछि अमेरिकी र उत्तर कोरियाली अधिकारीबीच भेटवार्ता तय भएको खुलासा भएको थियो ।
तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले थप प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेपछि उत्तर कोरियाले अन्तिम समयमा वार्तामा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिएको थियो । यसपटक दक्षिण कोरिया सरकारले उत्तर कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरूबीच कुराकानी नहुने जानकारी दिएको छ । बीबीसी
फागुन १० गते, २०७४ - १४:१५ मा प्रकाशित